आउने होईन् त ? सौराहा फूड फेष्टिवलमा राष्ट्रिय कलाकारको बेजोड प्रस्तुतिमा रमाउन – Saurahaonline.com
आउने होईन् त ? सौराहा फूड फेष्टिवलमा राष्ट्रिय कलाकारको बेजोड प्रस्तुतिमा रमाउन
चितवन, माघ १६ । पर्यटन आगमन बृद्धिका लागि सौराहामा माघ २८ गतेबाट सुरु हुने १२ औं सौराहा फूड फेष्टिवलको तयारी तिब्र पारिएको छ ।
फेष्टिवललाई भब्य र सभ्य बनाउन व्यवसायीहरुले तयारी सुरु गरेका हुन । सौराहा रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल(क्षेत्रीय रेवान) सौराहाको आयोजनामा सौराहा नजिक रहेको सिसुवार चौरमा फुड फेष्टिवल हुदैछ जहा यतिबेला तयारी धुमधाम भईरहेको छ ।
प्रेम दिवस मनाउन सौराहा आउने युवायुवतीलाई केन्द्रीत गरी रेवानले प्रेम दिवसको अवसर पारेर सौराहा फुड फेष्टिबलको आयोजना गर्दै आएको छ । फेष्टिवल सम्पन्न गर्न मुल समिति र २५ वटा उप समिति गठन गरी तयारीको काम सुरु गरिएको क्षेत्रीय रेवान सौराहाका अध्यक्ष गोर्कण गिरीले बताउनु भयो । आफुहरु धुमधाम तयारीमा लागेको उहाको भनाई छ ।
फागुन ३ गते सम्म चल्ने सो फेष्टिवलमा व्यवसायीहरुले खाना र आवासमा १५ प्रतिशत छुट, साना पर्यटन व्यवसायी समूहसँग सहकार्य गरेर व्यवसायीहरुले सामान खरिदमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाईएको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भयो । फेष्टिबलमा ५० वटा खाना र १० वटा अन्य गरी ६० वटा स्टलहरु रहने छन् । यहा निकै सस्तोमा गुणस्तरीय खानाका परिकार पाईने गिरी बताउनु हुन्छ ।
फेष्टिवलमा थारु,नेवारीसंगै स्वादेशी तथा विदेशी खानाका परिकारहरु रहने उनले बताए । थारू संस्कृतिको संरक्षणको लागि फेष्टिबलमा परम्परागत थारू समुदायका खाना र सांस्कृति नृत्य प्रस्तुत गरिने छ ।
पाँच दिनसम्म चल्ने सो फेष्टिबलमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेलकुद प्रतियोगितासमेत गरिने छ । फेष्टिबलमा रेष्टुरेण्ट कर्मचारीबीच वेटर रेस, प्रेमपत्र लेखन, तेक्वान्दो, महिलाहरु बीच म्युजिकल चियर, उत्कृष्ट खाना, घैला रंग्याउने र बालबालिकाबीच बेलुन फुटाउने प्रतियोगिता लगाएतका धेरै खेलहर समेत हुने छन् ।
फेष्टिबलबाट भएको आम्दानीबाट घुम्ती शौचालय निर्माण, राप्ती नदी संरक्षण, होली पर्व, उज्यालो सौराहा,बालश्रम न्यूनीकरण, सडक बालबालिका पुनस्थापनामा सहयोग गरिने छ ।
फेष्टिवलमा खानाका परिकारसगौ चर्चीत राष्ट्रिय गायक गायिकाहरुको बेजोड प्रस्तुति रहने र फेस्टिवल प्रचार प्रसारमा आफुहरु निके लागेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक सुर्य रिमालले बताउनु भयो ।